မိုင်းတုံမြို့ နောင်ပါရင် - ရွာသစ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် ကျပ် ၅၅ သန်းသုံးစွဲမည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
မိုင်းတုံမြို့ နောင်ပါရင် - ရွာသစ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် ကျပ် ၅၅ သန်းသုံးစွဲမည်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ နောင်ပါရင် - ရွာသစ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း (၀/၅.၅)မိုင်အား ကျပ်(၅၅ . ၁၃၅) သန်း ကုန်ကျမည့် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းဆောင်ရွက်ရန် Power Earth Co.,Ltd က တင်ဒါရသွားကြောင်း သိရသည်။
"မြေသားလမ်း(၁၈)ပေအကျယ်နဲ့ ရေနှုတ်မြောင်းရယ် Box Culvert တစ်စင်းရယ် ဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီ။ လမ်းခင်းဖို့ ကျောက်ထုတ်လုပ် စုဆောင်းနေဆဲပါ။ အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေလည်း တောင်ကြီးမှာ သွားရောက်ခေါ်ယူနေပါပြီ။ အချိန်မီသတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ"ဟု Power Earth Co.,Ltdမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးစိုင်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ လမ်းအား ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေမှ ခွင့်ပြုပေးခြဲ့ပီး တင်ဒါအောင်မြင်သည့် Power Earth Co.,Ltdသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံထားကြောင်း သိရသည်။
သတင်း/ဓါတ်ပုံ - အောင်ဇေယျ
ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၊ မိုငျးဆတျခရိုငျ၊ မိုငျးတုံမွို့နယျရှိ နောငျပါရငျ - ရှာသဈ ကြေးရှာခငျြးဆကျလမျး (ဝ/၅.၅)မိုငျအား ကပျြ(၅၅ . ၁၃၅) သနျး ကုနျကမြညျ့ ကြောကျခြောလမျးခငျးခွငျးဆောငျရှကျရနျ Power Earth Co.,Ltd က တငျဒါရသှားကွောငျး သိရသညျ။
"မွသေားလမျး(၁၈)ပအေကယျြနဲ့ ရနှေုတျမွောငျးရယျ Box Culvert တဈစငျးရယျ ဆောငျရှကျပွီးပါပွီ။ လမျးခငျးဖို့ ကြောကျထုတျလုပျ စုဆောငျးနဆေဲပါ။ အလုပျသမားအဖှဲ့တှလေညျး တောငျကွီးမှာ သှားရောကျချေါယူနပေါပွီ။ အခြိနျမီသတျမှတျကာလအတှငျး ပွီးစီးအောငျ ဆောငျရှကျသှားမှာပါ"ဟု Power Earth Co.,Ltdမှ မနျနဂေငျြးဒါရိုကျတာ ဦးစိုငျးမွငျ့အောငျက ပွောသညျ။
အဆိုပါ လမျးအား ကြေးလကျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ဘဏ်ဍာရေးနှဈအတှကျ ပွညျထောငျစုရနျပုံငှမှေ ခှငျ့ပွုပေးခွဲ့ပီး တငျဒါအောငျမွငျသညျ့ Power Earth Co.,Ltdသို့ လုပျငနျးအပျနှံထားကွောငျး သိရသညျ။